လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ – Office Application in the Cloud (29) | MoeMaKa Burmese News & Media
ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ညီမျှချင်း ဖော်မြူလာများကို Sheet မှာ သုံးစွဲခြင်း
သချာင်္ ဖော်မြူလာတွေထဲမှာ ၇ + ၉ ပြီးတော့ ၅ + ၂ × ၈ ဆိုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ complex formula တွေလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒါတွေက ဘယ်ဂဏန်းကို အရင် တွက်ချက်ရမယ် ဆိုတဲ့ အစဉ်အတိုင်း လုပ်ရတာ ရှိလာတယ်။ order of operation လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာလိုကတော့ ကွင်း၏မြှောက်စားပေါင်းနှုတ်လို့ ကျောင်းသားတွေက သိကြပါတယ်။ () ထဲကဟာကို အရင်တွက် ပြီးမှ ၏ ဆိုတဲ့ ထပ်ညွှန်းကိန်း (exponential) ကိုတွက်၊ ပြီးမှ * မြှောက် ၊ ပြီးမှ / စား၊ ပြီးမှ + ပေါင်း၊ နောက်ဆုံးမှ ဖော်မြူလာထဲမှာ – နှုတ်တာကို လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Sheet မှာလည်း အဲသည်နည်းအတိုင်း ကျင့်သုံးရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ P E M D A S လို့ အတိုကောက် အစဉ်တွက်နည်းကို မှတ်ပါတယ်။ အောက်ပါကို ကြည့်ပါ။
အဖြေက ၁၂ ပါ။ အဲသည် ညီမျှခြင်း ဖော်မြူလာကို Sheet ထဲ ထည့်လိုက်ရင်လည်း ၁၂ အဖြေ ထွက်ပါတယ်။ သူကလည်း အဲသည် တွက်နည်းအစဉ်အတိုင်း တွက်လို့ပါ။
ရှုပ်ထွေးသော တွက်နည်း ဖော်ဖြူလာ ထည့်သွင်းခြင်း
အောက်ပါ Google Sheet မှာ ပစ္စည်း ၃ မျိုး ရဲ့ တခုချင်း ဈေး၊ အရေအတွက် နဲ့ ပစ္စည်းအလိုက် ကျသင့်ငွေကို ရိုးရိုးဖော်မြူလာနဲ့ တွက်ထားပါတယ်။ Line total တခုချင်းစီမှာ – d3 = b3*c3, d4=b4*c4, d5=b5*c5 နဲ့ တွက်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ d3, d4, d5 တွေကို ပေါင်း၊ နောက်တော့ အခွန်နှုန်း ၅.၅% – (မြှောက်ဖော်ကိန်း ၀.၀၅၅) နဲ့ ပြန် မြှောက်ပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးတွက်နည်းက d6 = (d3+d4+d5)*0.055 ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံကို ကြည့်ပါ။
(D3+D4+D5) = $274.10. (ဒါကို အရင်တွက်ပါတယ်၊ ကွင်းထဲက ဟာက ပထမဦးစားပေး)
ပြီးတော့ tax rateနဲ့ မြှောက် – $274.10*0.055.
the tax က $15.08.
အကယ်၍များ d5 cell ထဲက ကိန်းကို ပြင်လိုက်ရင် အလိုလို tax ကို ပြောင်းတွက်သွားတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
တွက်နည်းအစဉ် (ကွင်း၏မြှောက်စားပေါင်းနှုတ်) ကို အခြေခံပြီး ရှုပ်ထွေး ဖော်မြူလာကို ထည့်ခြင်း
အောက်မှာကတော့ line total လို့ခေါ်တဲ့ တခုချင်းစီ ကျသင့်ငွေကို မတွက်တော့ပဲ တခါတည်း သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်း တခုချင်းဈေးနဲ့ သူ့အရေအတွက်ကို တခါတည်း မြှောက်၊ နောက်တခုကိုလည်း အရေအတွက်နဲ့ ဆက်မြှောက်ပြီး အားလုံးပေါင်း – subtotal တွက်တာကို ထည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။
အောက်မှာ ပြတဲ့အတိုင်း sub total လို့ cell တခုမှာ ရိုက်၊ ပြီးတော့ C5 cell မှာ ဖော်မြူလာကို တခါတည်း ထည့်ကြရအောင်ပါ။
C5 = B3*C3+B4*C4. လို့ ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ တွက်နည်းအစဉ် order of operation အရ မြှောက်ဖော်ကိန်းတွေကို အရင် မြှောက်ပြီးမှ ပေါင်းတာကို တွေ့ရပါမယ်။
multiplication: 2.79*35 = 97.65
2.29*20 = 45.80.
ပြီးတော့မှ မြှောက်လာဒ် ၂ ခု ကို ပေါင်း – 97.65+45.80.
press Enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ အဖြေက – $143.45. ဖြစ်ပါတယ်။
ဂူးဂဲ sheet မှာ ဖော်မြူလာ မှားရင် သူက မှားတယ် ပြောမှာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်မှားတာကို ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်စစ်ရပါမယ်။
အောက်ပါ sheet မှာ line total တွေကို တွက်ထားပြီးနောက် အောက်က d6 and d7 မှာ discount ၂ မျိုး